Klever Inkqubo yeBlockchain Validators | Klever ezezimali
Cwangcisa indawo yokuqinisekisa kwaye uqhelane ne Klever womnatha
Ukulandela ukusetwa kwakhona kwe-testnet, uya kuba neeyure ezingama-24 zokuseta i-node yakho.
Ukuze uvavanye iindlela zethu zestaking, uya kwenza imisebenzi eyahlukeneyo yokuvavanya Klever Ityathanga.
Abaqinisekisi baya kwenza imisebenzi eyahlukeneyo ukunceda ukwazisa Klever uluntu njl.
Iqala nge-1 kaMeyi
Klever testnet luluhlu lwemingeni ekhuphisanayo apho abaqinisekisi banokufunda, balungiselele, kwaye bafumane amanqaku ukuze balungiselele i-mainnet ezayo. I-testnet iya kwahlulwa ngokwezigaba ezi-4, uvavanyo ngalunye lunenkalo eyahlukileyo yokuqinisekisa nokukhusela Klever inethiwekhi ye-blockchain.
Gcwalisa ifomu yethu yesicelo sokuqinisekisa ebonisa injongo yakho yokuqhuba indawo.
Gcwalisa IFOMU APHA
Ukugqiba lo msebenzi, abaqinisekisi bayafuneka ukuba banike ulwazi malunga nesingqinisiso sabo. Ukongeza ekuvumeleni i Klever Iqela liyayazi injongo yakho yokuthatha inxaxheba, yongeza nakweyiphi na Klever Uluhlu lwemeyile ethile yeTestNet.
Iifom mazizaliswe ngokuchanekileyo. Iziqinisekiso ezibonelela ngedatha echanekileyo kwaye zijoyine Klever Iseva yeDiscord iya kongezwa kwindawo enikezelweyo Klever Itshaneli yeTestnet. Abo bagcwalisa ifomu kwaye baqinisekise ukufikelela kwi-validator discord channel baya kufumana amanqaku apheleleyo.
Seta isingqinisiso sakho
Injongo yalo msebenzi kukuba abaqinisekisi bagqibe amanyathelo okuseta i-node yabo, oku kubandakanya
Ukuseta okokuqala kwe-node yakho kwihardware ethembekileyo oyikhethileyo
I-Node ikwi-sync kunye nenethiwekhi
I-Node ibhalisiwe njengesiqinisekiso kwaye iyakwazi ukuvelisa iibhloko xa i-validators yakho ijika
Cwangcisa i-node yakho ngokungqinelana namaxwebhu anikiweyo https://docs.klever.finance/klever-blockchain/how-to-run-a-node
Siza kujonga ukuba idilesi oyingenisileyo ivelise iibhloko. Amanqaku apheleleyo ukuba i-node iphezulu, isebenza kwaye ivelisa iibhloko xa i-validators yakho ijika
Misela esweni lakho
Injongo yalo msebenzi kukuba abaqinisekisi babonise ukuba ukubeka iliso kwenziwe kwasebenza. Abaqinisekisi bakhululekile ukuba basebenzise nakuphi na ukujonga okukhethileyo kodwa kufuneka banikwe iinkcukacha ngokwaneleyo ukuze bancede babeke iliso kwimpilo yendawo.
Ukhululekile ukuseta indawo yokubeka iliso yakho nangayiphi na indlela oyithandayo.
Uya kugwetywa ngokwezi khrayitheriya zilandelayo
Isiqingatha samanqaku ukuba unikezela ngobungqina kuphela (ukuthathwa kwesikrini) kokubeka iliso kwindawo yakho
Amanqaku apheleleyo ukuba unikezela ngeblogi evulekileyo okanye i-gitub repo ebonisa abanye abaqinisekisi ukuba bafaka njani ukuseta kwakho esweni.
Bhala malunga nokuseta isingqinisiso sakho
Injongo yalo msebenzi kukuba abaqinisekisi babelane ngamava alungileyo malunga nokuseta kwabo Klever Indawo yetestnet.
Isithuba esibhaliweyo sikawonke-wonke kufuneka senziwe malunga namava akho kwaye wabelane ngeqonga leendaba zentlalo njenge-Twitter. Isithuba kufuneka sichazwe ngokwaneleyo ukuba abanye banokulandela indlela yokwenza i-node.
Kuya kugwetywa ngokwezi khrayitheriya zilandelayo
Isiqingatha samanqaku ukuba kuphela isithuba esibhaliweyo
Amanqaku apheleleyo ukuba isithuba sibhaliwe kwaye kwabelwana ngaso nge-Twitter usebenzisa yethu Klever_io isiphatho
Ukuba isithuba asicacanga okanye sifutshane unokohlwaywa ngamanqaku
Thumela malunga Klever I-Testnet
Injongo yalo msebenzi kukuba abaqinisekisi babhale kwi-tweet malunga ne-Testnet kunye nokuthatha kwabo inxaxheba kwi-Testnet.
I-Tweet evela kwiakhawunti yakho ye-Twitter yokuqinisekisa, kufuneka ibe yiakhawunti yakho ye-Twitter. I-tweet kufuneka ibonise ukuthatha kwakho inxaxheba Klever Testnet, kufuneka uthege @klever_io kwi-tweet yakho.
Amanqaku apheleleyo kwi-tweet ukuba
Okubhaliweyo kubonisa ukuthatha kwakho inxaxheba Klever TestNet
Umfanekiso okanye ikhonkco elinxulumene ne Klever TestNet
Ukuba i-tweet ayidibananga nawo omathathu amanqaku, kuya kwabelwa i-ziro points
Ngexesha ngalinye, uya kufumana amanqaku ngokuzalisa imisebenzi yenethiwekhi kunye noluntu. Inani lamanqaku afunyenwe ngumqinisekisi ngumlinganiselo wokulungela abaqinisekisi.
Inqanaba lesiBini - Iziseko zophuhliso
Inqanaba lesibini le-testnet yenkuthazo limalunga neziseko zophuhliso kunye novavanyo lomthwalo.
Emva kokuba i-testnet isetyenzisiwe, uya kuba neeyure ezingama-24 zokuseta indawo yakho yeSigaba sesi-2.
Cwangcisa indawo yakho kwaye usayine phakathi kweentsuku ezi-2
Ukuze ugqibezele lo msebenzi, abaqinisekisi kufuneka baphinde babuyisele ii-nodes zabo ngexesha elifanelekileyo kwiintsuku ze-2.
Emva kokusetha kwakhona i-Testnet, abaqinisekisi kufuneka baphinde benze iindawo zabo kunye nokuvumelanisa kwakhona. Ukongeza, kufuneka bachongwe ngokutsha. Abaqinisekisi ababuyisela ii-wallet zabo ezisetyenzisiweyo ngaphambili baya kuba ngabokuqala ukufumana amathokheni e-testnet, kwaye baya kuba nako ukukhenkcela, ukuzimela ngokwabo, kwaye bafumane abathunywa abaseleyo ukuba banyulwe.
Amanqaku aya kubalwa ngedatha ye-on-chain kunye needilesi ze-wallet ukusuka kwiSigaba soku-1.
Amanqaku akhethiweyo kwaye aqinisekisiwe ngempumelelo
Kwiintsuku ezi-2 zokuqala zokusetha kwakhona i-Testnet, uya kunikwa amanqaku apheleleyo
Ngomhla we-3 wokusetha kwakhona kwe-Testnet, uya kunikwa isiqingatha samanqaku
Emva komhla we-4 wokusetha kwakhona kwe-Testnet kuya kunikwa ikota yamanqaku
Gcina i-80% ixesha lokuphumla ngexesha lokuqhuma komthwalo
Injongo yalo msebenzi kukuba abaqinisekisi babe neenode ezithembekileyo kwaye bagcine ngaphezulu kwe-80% yexesha.
The Klever iqela liya kudala ukugqabhuka komthwalo ukuvavanya inethiwekhi ngexesha lomthwalo ophakamileyo. Vii-alidators ezingakwaziyo ukugcina ixesha ziya kuvalelwa kwinqanaba leprotocol.
Qinisekisa ukuba i-node yakho iyakwazi ukugcina i-80% yexesha. Ukuba umqinisekisi unokubeka iliso okwaneleyo kwi-node yabo eneziseko ezithembekileyo oku kufuneka kube lula.
Ixesha lokuphumla lingaphezulu kwe-80% kwaye akazange avalelwe. Uya kufumana amanqaku apheleleyo.
Injongo yalo msebenzi kukuba abaqinisekisi babonise ukuba bayakwazi ukuphucula kunye nexesha elincinci lokunciphisa.
Ngesi sigaba i Klever iqela lobugcisa liya kubonelela ngamanyathelo okuphucula. Uphuculo kulindeleke ukuba lwenzeke ngexesha elifanelekileyo kunye nexesha elincinci lokuphumla.
Indawo epheleleyo yophuculo oluyimpumelelo phakathi kweentsuku ezi-2 zesicelo sokuphucula
Isicelo sophuculo emva kweentsuku ezimbini asifanelekanga ukufumana amanqaku
Bhala kwaye upapashe inqaku
Bhala kwaye upapashe inqaku legama le-400-6000 elibonisa ulwazi lwe Klever iteknoloji kunye ne Klever I-ecosystem, iminikelo, iimveliso kunye nendlela ezidibana ngayo zonke.
Bhala inqaku lakho kwaye ulipapashe kwiqonga likawonke-wonke olikhethileyo: iblogi yobuqu, iMedium, iNtetho, uMoya, incwadana yeendaba, njl.njl. Yabelana ngeli nqaku nge-twitter kunye nethegi Klever_io
Ukuba isithuba asicacanga okanye asifutshane kakhulu unokohlwaywa ngamanqaku
The Klever Iqela liya kubonelela bonke abaqinisekisi ngenkxaso yobugcisa kwitshaneli yethu yeDiscord, uhlaziyo lolwazi lweveki, kunye nezibhengezo zokuqalisa kwesigaba ngasinye.
Inqanaba lesiThathu - Inkxaso yoFikelelo
Cwangcisa indawo yakho kwaye usayine phakathi kweentsuku ezi-4
Ukuze ugqibezele lo msebenzi, abaqinisekisi kufuneka baphinde babuyisele ii-nodes zabo ngexesha elifanelekileyo kwiintsuku ze-4. Oku kufuneka kwenziwe emva kokusetha ngokutsha.
Emva kokusetha kwakhona i-TestNet, abaqinisekisi kufuneka baphinde benze iindawo zabo kunye nokuvumelanisa kwakhona. Ukongeza, kufuneka batyunjwe kwakhona. Abaqinisekisi ababuyisela ii-wallet zabo ezisetyenzisiweyo ngaphambili baya kuba ngabokuqala ukufumana amathokheni e-testnet, kwaye baya kuba nako ukukhenkcela, ukuzimela ngokwabo, kwaye bafumane abathunywa abaseleyo ukuba banyulwe.
Kwiintsuku ezi-4 zokuqala zokusetha kwakhona i-Testnet, uya kunikwa amanqaku apheleleyo
Amanqaku aya kubalwa ngedatha ye-chain-chain kunye needilesi ze-wallet ukusuka kwisigaba soku-1.
Injongo yalo msebenzi kukuba abaqinisekisi babe nee-node ezithembekileyo kwaye bagcine ii-nodes kwi-intanethi ngaphandle kokuvalelwa.
Qinisekisa ukuba i-node yakho iyakwazi ukusebenza phantsi kweemeko ezizinzileyo kwaye ungavalelwa. Ukuba umqinisekisi unokubeka iliso okwaneleyo kwi-node yabo eneziseko ezithembekileyo oku kufuneka kube lula.
Ngenxa yokuba i-testnet ibe yindawo yokufunda siya kuvumela intolongo enye. Uya kufumana amanqaku apheleleyo kwi-1 okanye i-0 yejele. Oku akubandakanyi iintolongo kuyo nayiphi na imingeni yesivumelwano sothungelwano kwi-testnet
Ukunikezela KLV Amathokheni ubuncinane kwabanye abaqinisekisi ababini
Injongo yalo msebenzi kukuba abaqinisekisi bafunde indlela yokunika amandla kwi-wallet.
Ngeli nqanaba kufuneka usebenzise i-testnet KLV ukunikezela kwabanye abaqinisekisi. Isixa se KLV inokwahluka. Nangona kunjalo silindele abathunywa abaliqela ukuba bavavanye i-staking dynamics.
Isiqingatha samanqaku kubathunywa aba-2 kwabanye abaqinisekisi ababini
Amanqaku apheleleyo adluliselwe ngaphezulu kwe-10 kwabanye abaqinisekisi abaninzi
Ibango leMivuzo yeNode
Injongo yalo msebenzi kukuba abaqinisekisi bafunde indlela yokwenza ibango lembuyekezo yeenodi.
Isiqingatha samanqaku okubanga kanye
Amanqaku apheleleyo angaphezulu kwe-5 yamabango
Abaqinisekisi bayakhuthazwa ukuba bahlangane kuluntu, basasaze ilizwi, kwaye bafumane abaninzi abaqinisekisayo ababandakanyekayo ekulweni.
Apha ngezantsi kukho iibhloko esizixhasayo
Idumile Nge-Cryptocurrencies Ngaphezulu kwe-10,000+